Beta-ka iOS 13.2 waxaa ku jira tixraacyada AirPods oo leh buuq la joojiyo | Wararka IPhone
IOS 13.2 beta waxaa ku jira tixraacyada dhawaaqa-joojinta AirPods
Waxaan ka wada hadalnay dhowr bilood suurtagalnimada in wiilasha (iyo gabdhaha) ee Cupertino ay bilaabaan sanadkan oo dhan, jiil cusub oo AirPods ah, oo noqon lahaa kii saddexaad, oo leh hal ugub cusub: buuq baajinta. Sida muuqata wararkaas xanta ah ayaa la aasaasay, tan iyo markii beta cusub ee macruufka 13.2 waxaa ka mid ah tixraacyada dhawaaqa-joojinta AirPods.
Tixraaca ayaa ku jira qaab astaan ​​ah oo ka mid ah goobaha marin u helka, taas oo soo jeedinaysa in kuwani ay u shaqeyn doonaan sidii dhagaha dhagaha oo kale sida AirPods hadda u shaqeeyaan. Tixraacyo kale ayaa soo jeedinaya taas bixin lahaa qaabab kala duwan oo loo isticmaalo: iyadoo la joojinayo buuq iyo maqnaansho, oo loo yaqaan 'mode focus'.
Nambarka moodeelka jiilka seddexaad ee AirPods ee leh nidaamka baajinta dhawaaqa waa B298. Haddii xanta tilmaamaysa dhacdo soo bandhigid suurtagal ah dabayaaqada bishaan la xaqiijiyo, waxay u badan tahay taas AirPod-yada buuqa-baajinta dheer ayaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa dhammaadka bishan.
Hadda, Apple waa mid kamid ah shirkadaha wax soo saara ee aan soo saarin nidaamka ka noqoshada dhawaaqa ee sameecadaha sameecadaha waaweyn, tani waa mid ka mid ah sababaha qaar isticmaaleyaashu aysan kaliya u go'aansanin inay iibsadaan oo ay doortaan moodel hadda laga heli karo tartanka (Sony ama Samsung) taasna dhowaan ayaa lagu ballaarin doonaa moodello badan sida Amazon iyo midka hadda la soo bandhigay Microsoft.
Joojinta sawaxanka ayaa ku habboon markaan rabno gebi ahaanba ka go'doonsan buuqa hareerahayaga, ahaanshaha mid kufiican markaan ku safrayno tareenka dhulka hoostiisa mara, waxaan ku jirnaa qolka jimicsiga ama xaalado aan buuq hareeraha ka socda uusan noo oggolaaneyn inaan ku raaxeysano muusigga aan jecel nahay iyada oo loo marayo dhegaha-dhegaha aan dhegaha ku xirnayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » IOS 13.2 beta waxaa ku jira tixraacyada dhawaaqa-joojinta AirPods
Tani waa sida loo yaqaan 'Deep Fusion' ee ka shaqeeya iPhone 11 iyo 11 Pro
Apple wuxuu bilaabay iOS 13.2 Beta oo leh Deep Fusion iyo warar badan oo dheeri ah